အင်းစိန်ထောင်သို့ ရောက်ရှိနေပြီတဲ့ အဆိုတော်ပိုပိုရဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် HU GO – Update News
ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ (၁)ရက္ေန႔ ကေန စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေျခအေနေတြေ ၾကာင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အႏုပညာရွ င္ေမာင္ႏွမေတြ က စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ လူထုလႈပ္ ရွားမႈေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလို ပြည်သူေ တွနဲ႔အတူ လႈပ်ရွားနေကြတဲ့ အႏုပညာရွ င်တွေထဲမွာ ပိုပိုကလည်း လ မ်းမေပါ်ထွက်ကာ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိဳး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
လူထု လႈပ္ရွား မႈေတြမွာ ပါဝင္ရင္း ၅၀၅(က)ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံရမယ့္ သူေတြ ထဲတြင္ ပါဝင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန ့တြင္ သူမရဲ႕အိမ္တြင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခံလိုက္ရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အရင္ ရက္ပိုင္းကဆိုရင္ ပိုပိုနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေကာလဟာလ ေတြက ထြက္ရွိေနတာ ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕အိမ္ ကလည္း အခုခ်ိန္ထိ ဘယ္ေရာက္လို႔ ေရာက္ မွန္းမ သိေသးတာေၾကာင့္ မမွန္တဲ့ သတင္းေတြကို မတင္ၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုထား တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီေန႔ မွာေတာ့ သူမရဲ႕သူ ငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ Hu Go က “မပို အင္းစိန္ေထာင္ ေရာက္ၿပီလို႔မိသားစုထံမွသိရက်န္းမာပါေစအမ 🙏”ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္တြင္တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
”က်န္းမာေရးမေျခ အေနေတာ့ မသိရေသးဘူး! သိရရင္ျပန္ မွ်ေဝေပးပါ့မယ္! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုေတာ့ Will Power ေကာင္းတယ္! အဲ့ေတာ့ I HOPE So သူဒီဒဏ္ကို အသာေလးေက်ာ္ လႊားႏိုင္မွာပါ!
သူအ တွက်လဲ ဆုေတာင်းေပးကြပါအုံး🖤”လို႔ သူရဲ႕ပို႔စ်ေအာက်တွင် ပရိသတ်တွေသိေအာင် ထပ်ပြီးေရးသား ျမႇဝေထားတာ ဖြစ်ပြီး ပိုပိုရဲ႕ ပရိသေတ် တွကလည်း ကျႏ်းမာေရးေ ကာင်းမွန်ပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်ေမြာက်ပါစေလို႔ ဆုေတာင်းထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၁)ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေေ ကြာင့် ပြည်သူတွေနဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှ င်မောင်နှမတွေ က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို ပွညျသူေ တှနဲ့အတူ လှုပျရှားနကွေတဲ့ အနုပညာရှ ငျတှထေဲမှာ ပိုပိုကလညျး လ မျးမပေါျထှကျကာ အားသှနျခှနျစိုကျ ကွိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖွစျ ပါတယျ။
လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရမယ့် သူတွေ ထဲတွင် ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ ့တွင် သူမရဲ့အိမ်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံလိုက်ရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ရက်ပိုင်းကဆိုရင် ပိုပိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကောလဟာလ တွေက ထွက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အိမ် ကလည်း အခုချိန်ထိ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက် မှန်းမ သိသေးတာကြောင့် မမှန်တဲ့ သတင်းတွေကို မတင်ကြဖို့ တောင်းဆိုထား တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့သူ ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် Hu Go က “မပို အင်းစိန်ထောင် ရောက်ပြီလို့မိသားစုထံမှသိရကျန်းမာပါစေအမ 🙏”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင်တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
”ကျန်းမာရေးမခြေ အနေတော့ မသိရသေးဘူး! သိရရင်ပြန် မျှဝေပေးပါ့မယ်! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောင်းတယ်! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီဒဏ်ကို အသာလေးကျော် လွှားနိုင်မှာပါ!
သူအ တှကျလဲ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ပို့စျအောကျတှငျ ပရိသတျတှသေိအောငျ ထပျပွီးရေးသား မြှဝထေားတာ ဖွစျပွီး ပိုပိုရဲ့ ပရိသတျေ တှကလညျး ကနြျးမာရေးေ ကာငျးမှနျပွီး အမွနျဆုံး လှတျမွောကျပါစလေို့ ဆုတောငျးထားကွတာပဲဖွစျပါတယျ။